Mashoko pamusoro pePixelHELPER Foundation
Nezve iyo PixelHELPER
Chiedza chinoratidzira kuHotera Sonnenbichl, chigaro cheGerman chemambo wekushungurudza weThailand.
Tagesschau inoshuma rwiyo rwedu vachipesana naMambo weThailand.
Iyo isiri-purofiti sangano PixelHELPER anotarisa pasi rose Mumiririri & Artist Network yeHuman Rights against Kudzvinyirira & rusununguko rwekutaura kurwa. Nounyanzvi isu tinoda kudaro zvinokosha zvehupfumi ratidza. Isu tinoshandawo Development mapurojekiti eAfrica. Own Yakatemerwa chingwa makeke gadzira kuwedzera Kugadzikana kwechikafu nokuti Musasa wevapoteri, Matunhu ekukonana & njodzi dzinongoitika dzoga chingwa chakasimba mumakangi. Tiri kuwedzera iwo Kugadzikana kwechikafu muAfrica. Munharaunda Emergency emergency PixelHELPER ari kuyedza padyo nemafekiniki echingwa chakaomeswa muAfrica ari padyo UNHCR misasa yevapoteri kuvhura zvipatara zvidiki zve mobile mobile. Ndokumbirawo tibatsireiwo pa Ipa menyu chinhu uye kutsigira basa resangano redu.
Humor inoumba nharaunda! Chero bedzi isu Menschlichkeit,rudo uye kusetsa batanidza, hazvina basa nezvedu kunoparadzanisa, Humor inovakurudzira kubvumidza, Kushivirira kune moyo muchena kusetsa, muhukuru hwakasununguka unhu inoruramiswa, chinangwa chaicho cha vanhu kuva.
Kubudikidza nezvedu basa rokugadzira Ngatiitei nyika imwe nzvimbo yakanaka uye kutungamirira kwairi kuchinja kukuru kwevanhu, chinangwa chikuru democracyMuzita re kubvumidza fanira Pixel Munyaradzi taura chokwadi, a kusashivirirana kwete kushivirira. Iyo inonyanya kutarisa pamapurojekiti e unyanzvi rusununguko, kodzero uye pamusoro Anti-Semitism.
Ita zvisizvo zvinhu nekuda kwezvikonzero zvakanaka!
ari Pixel Munyaradzi kurwisana nevepasi rose activist uye mutevedzeri wenyanzvi nzira isina kujairika pamusoro mararamiro evanhu, Kakawanda, vashandi vanobatana vanoshandisa shanduro yehutu-ye-ye-teknolojia uye zvese zvishandiso zvekunyengedzera kuti aise zvinetso mukutarisa kwehuwandu hwemashoko.
Kusaderedzwa nemheremhere wenyika, tinoenda nenzira yedu, takadzikama uye takachengeteka, tisingatyi pangozi uye, tine zvinangwa zvakakwirira mupfungwa, kudzivirira pasi. Kutenda kwedu kwekutanga ndechokuti mazano eFrance Revolution "rusununguko, ukama hwehama" huchasimudzirwa kurwisana nekudzokorora kwekusatenda kwezvematongerwo enyika.
Kuparadza kwa Walter Lübcke mural nehurumende yeMoroccan.
Mutungamiri weBundestag Wolfgang Schäuble akadaro muBundestag izvo Lübcke . Iko kusununguka kwehunyanzvi kuri kutyisidzirwa pasi rese Naizvozvo PixelHELPER!
Muvambi wePixelHELPER ndiye mwenje wechiedza Oliver Bienkowski anobva kuGermany. Mamwe mwenje wechiedza & chiito artists uye akawanda cartoonists akapararira pasi rose uye anoshanda pamwe PixelHELPER yenyika iri nani.
yedu Mwoyo uri kure, asi mikana yedu ndeyekupedzisira.
We. Kugadziriswa kwekugadzikana kwepabonde sechinhu chinonyanya kushandiswa
Robin Washington Munhu wose anoziva. The infamous gororo Held inotora zvakanyanya vorongerwaavo vane mabasa angangodaro varipo wakakurumbira ivai iyo yepakutanga. ne Pixel Mubatsiri International kukakavara pamusoro 70 international artists for one nyika yakanakakutora vapfumi muEurope uye kupa varombo munyika yose. Tiripo. Neboka revanhu vake akatendeka ine PixelHELPER senhengo ye kodzero imba yake huru Africa kuwanikwa. Kwemakore tinorwisana Shamwari & mudziviriri wevarombo uye semhiko muvengi avo avo Simba uye upfumi zuri Kudzvinyirira kudzvinyirirwa.
Chikafu chinokonzerwa nekakodhi rubatsiro rwekukurumidza kuMorocco
"PixelHELPER kuwedzera rako rekugadzirisa chivako chekugadzira & satire nebasa rako"
anoti Germany radio culture
"PixelHELPER ndeimwe yezvinyorwa zvitsva zvezvematongerwe enyika uye unomirira unyanzvi hwakawedzerwa," vamwe vanoti. Isu tinoti: Art inofanira kutanga kurwadziwa, kumutsa nekumukira. Icho chiri chokuita neunyanzvi sechimiro chekushamwaridzana kwevanhu mumweya weChiedza. Mishandirapamwe yedu inokurudzira mikana yehupirisiti semasimba mashanu ehurumende. Iko naizvozvo hausi girazi raunomira kune chokwadi, asi nyundo yaunoita nayo.
Tinodzidza. Tiri kutamba. Tinokura pfungwa. Tinowana pfungwa kubva murima. Tinoshandisa musiyano. Tinoita kuti zvive zvakanaka, kana kuti kuita chimwe chinhu chinyangarika. Tinotarisa maonero. Isu tinoita kubatana. Tinoshandura maonero ako. Tinoshanda mumumvuri. Tinotsvaka chikonzero nei nechiedza. Tinopa mhinduro. Tinotora chimiro. Tinopomera. Isu tinotamba nechinhu chechiedza mukati medu. Tinomutakura kunze.
Uye isu tinoti: Tiri PixelHELPER
Avo vasina simba vanobatanidzwawo nesimba
PixelHELPER cube yakaenda kumativi ose enyika.
Kugadzirisa Rubik raMwari Cube mu vhidhiyo "In 80 mazuva pose" rinomiririra pamapatya ngetani vanhu kupote pasi, iyo Pixel Munyaradzi pamwe yayo mhenyu rukova crowdfunding rinoumbwa Anwendung muna Android PlayStore rakapotsa uye anokumbira Fafitera kukurukura.
Mukati yeupenyu tinosiya miitiro yakawanda. Kunyangwe muhupenyu hwevamwe vanhu vane migwagwa yatinogona kungoyambuka kamwe chete uye kuti takakosha zvakanyanya zvokuti hupenyu hwavo hwekupedzisira hwakachinja. Panove pasina kuwedzera kukudzwa kwebasa rePixelHELPER Foundation kunze kwekutora kwakasimba kwevanhu vedu.
Tinorwisana nechido chenyika iri nani.
Kubatana kwevanhu semukana wekubatana mukati memazuva ano. Chengetedza kugoverwa kuburikidza nemazwi eku Facebook. Zombies haazive marudzi, ruvara kana chitendero. Icho chinonzi "Zombies kunze kweMitsva" inozviona sechinobatsirana chinobatsira mapuraneti. Zita racho ndiro rinobva kune zombie makombiyuta ari kutarisirwa kunze. Kutaura kwedu hakuna chinhu chisingapfuuri mhinduro kumatambudziko ose evanhu kuburikidza nekubatsira pakati pevamwe vatariri kuburikidza neivestream. Chinangwa chedu: Maawa e24 ekugara aripo kubva kumatsime enyika. Inoperekedzwa nevanyori venhau munharaunda dzehondo, kugovera rubatsiro mumusasa wevapoteri kana kuvhima vachengeti muKruger National Park. Mikana yekuti shanduro yedu yekudzivirira isingagumi Zvishandiso zvedu: Izwi reEmoticons re Facebook rinodzora rubatsiro rwekubatsira uye rinosarudza zviri kuitwa.
Zvazviri akunoita ndechokuti isu kutanga mhenyu karwizi pamwe yakajeka chidhiraivho uye kukoka nhengo "Zombies pasina kumiganhu" tsvimbo mhenyu murukova yedu. We kuchengetera magadzirirwo awo vatambi zvinhu zviri maonero uye nokukurumidza sei nokuchinja mhenyu murukova achitandadza dambudziko.
PixelHELPER Foundation | Mharidzo yebasa iri muMarrakech, Morocco
Pachinzvimbo chemuvambi waPielelHELPER, 2009 yakapa attac mubayiro "Tanga iwe pachako kuchinja" kwebasa rayo risina pokugara.
2013 vatanga pixels mubatsiri mutizi shit Storm Campaign, izvo apinda nhau dzakawanda German, kusanganisira Süddeutsche Zeitung aine chinhu nyaya yedu chiito.
2014 10 isu neshungu pamwe mishandirapamwe panguva US Embassy, ​​kuti NSA / drone the mano wokupomera uye ukasvika kufambirana vhiki kushambadza nyaya munhau.
2015 akawana vatengesi vemauto ved Dr. Ing. Oetker Group neusiku husiku kuburikidza nekufungidzirwa kwechiedza kuHurumende yeHurumende yeHisitori inoziva kusanganisa munyika yose.
Mushandirapamwe "Rudo rusina miganhu" pakati pixels Munyaradzi anoda rikanganise kutambudzwa ngochani munyika pevatongi nyika munyika. Kune vachiri nyika vakawandisa munyika dzakadai Iran, Nigeria, Mauritania, Sudan, Yemen, Saudi Arabia kana United Arab Emirates, apo ungochani zviri pamutemo uye mhosva inotongerwa rufu!
Rudo haruna ruzivo rwevakadzi, hapana ruvara rweganda kana chitendero! Rudo haruna ruzivo! Tinoda kuparadzira chirevo ichi, PixelHELPER, munyika yose nechokujekesa basa "Kubva muNaiwale".
Emergency cold capsule kune vanhu vasina pokugara
Zuva riri kuswedera nevasina musha vanoda rubatsiro rwedu. mhinduro yedu: The Pixel Munyaradzi chando kwechimbichimbi Kamudzira pamusoro nechando vanhu mumigwagwa Germany. Gore roga roga vashoma vanonzi Germans vanouraya nemhirizhonga yemhepo kune vanhu vasina musha vanofa. MuFGG kune vanhu vanopfuura hafu yemamiriyoni vasina vavakirwa kunze kwenzvimbo dzekuchengetedzwa kwenyika. Kazhinji, vanhu vanotumirwa kumusuo pasingapisi kutsetse kuti vazofa. Uye dambudziko rekushaya musha muGermany pacharo harina kugadziriswa. Iyi ndiyo iyo purogiramu yedu yekudzokerazve isina pokugara isina kupinda. Kutanga inotonhora kukurumidzirwa capsules kudzivirira pokugara pamberi nyore -dziviririka rufu, tiri kuvaka hurongwa kuti dzinokosha matambudziko pokugara, kushaya kuchengeteka, hapana basa mikana uye munzanga kuzvibvisa vakarwa, uye saka vanhu zvishoma nezvishoma kudzokera sezvinongoita upenyu allowed.
Isu tiri kungoita zvishoma zvishoma kune mbongoro pane imwe nyika duku inotarisa nyeredzi yakawanda kwazvo.
Pixel Mubatsiri International September 4th, 2020Oliver Bienkowski